Ciidamada Haftar oo weeraray meelihii lagala wareegay ee Ras Lanuf & Al-Sidra ee keydinta saliidda Libya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Ciidamada Haftar oo weeraray meelihii lagala wareegay ee Ras Lanuf & Al-Sidra...
Ciidamada Haftar oo weeraray meelihii lagala wareegay ee Ras Lanuf & Al-Sidra ee keydinta saliidda Libya
Muqdisho (sntv) Ciidamada iskood isagu magacaabay kuwa Qaranka ee Libya ee loo soo gaabiyo LNA) oo daacadda u ah Jeneraalka Mucaaradka ah ee Khalifa Haftar.
Ciidamada Haftar ayaa ku dhawaaqay dagaal xooggan kadib markii ay gacantooda ka baxday deegaannada Ras Lanuf iyo Al-Sidra oo 650 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Tripoli ee caasimadda Libya, deegaannadani oo gacanta u galay kooxo hubeeysan oo weeraray halkaasi.
Ciidamada Haftar ayaa gacanta ku hayay deegaannada bari Libya waxaana ay kasoo horjeedaan dowladdu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli oo iyaduna cambaareeysay weerada ay qaadeen maleeshiyaadka.
Ibrahim Jadhran, oo madax ka ah illaalada keydka petroolka ee magaalooyinka Ras Lanuf iyo Al-Sidra, ayaa ku sheegay muuqaal inuu la bahoobay isbahaysiga si dib loogu qabsado keydka shidaalka oo bishii September 2016-kii ay qabsadeen ciidamada daacadda u ah Jeneraal Khaliifa Haftar.
Mr. Jadhran ayaa muddo afar sano ah gacanta ku hayay haamanka keydka shidaalka wixii kadambeeyay 2011-kii waagaasi oo xilka laga tuuray lana dilay hogaamiyihii Libya Col Mucammar Al-Qaddaafi.
Previous articleBaaddii Ganacsatada waxaa u bedelay 8-sano oo Xabsi Ciidan ah.
Next articleDaraasiin dad ah oo Kooxda Arxanka daran B.Haram dishay.